ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူ့လက်ရာ”
သမီး ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီပုံတွေထဲက အချို့ကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, April 19, 2009
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်လည်း သမီးဆွဲတဲ့ ပုံတွေ ဆိုပြီး တင်နေတာ..
April 19, 2009 at 2:13 PM
ကိုအင်ဒီ.... ဒါကြောင့်လည်း ပညာရှိများက Great minds think alike. ဆိုပြီး ပြောကြတာပေါ့ဗျ....ဟီး။
April 19, 2009 at 2:21 PM
Dear Ko Paul,
Like Father like daughter.
ကြက်ဥခွံလေးကို ပြန်ကြည့်နေတဲ့ ကြက်ကလေး
ငါးတွေ အပြည့်ထည့်လို့ရတဲ့ ဘဲနှုတ်သီး အိုက်အိုက်ကြီး
April 19, 2009 at 2:50 PM
အန်ကယ်ပေါ သမီးက ဘယ်အရွယ် ရှိပြီတုန်းဗျ။
(တီမျိုးထင်မှာလည်း စိုး... :D )
ကလေးက ဆွဲတတ်ပါ့၊ အရောင်စပ်တာ အကြိုက်ဆုံးပဲ....။
ဘဲနှုတ်သီးထဲက ငါးကလေးတွေ့တော့ ပြုံးမိတယ်။
ကျန် ငါး ၂ေ ကာင်က အသက်လု ကူးနေကြတယ်ပေါ့လေ.... ဟားဟား....။
သမီးတွေက အဖြစ်ရှိတဲ့ အဖေများကတော့ သမီးတွေရဲ့ပုံတွေ တင်လို့
တို့များကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်အဖြစ် သမီးလည်း မရှိ - ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ ပန်းချီးပြိုင်ပွဲလုပ်တာ ဆွဲမယ့်သူမရှိလို့ အတင်းဝင်ဆွဲခိုင်းလို့ စုတ်တံတွေ ဘာတွေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ပြိုင်ပွဲထဲ ဝင်ဆွဲဖူးတယ် ဘာဆုမှ မရပါဘူး စုတ်တံတောင် ပြိုင်ပွဲထဲ ရောက်မှ ကိုင်ဖူးတာ
သမီးကို အားပေးပါ။ တကယ်တော်တဲ့ ပန်းချီပညာရှင် ဖြစ်မှာ။ သူအရောင်ကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ သူဆွဲတာ သိပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာပဲ။
April 19, 2009 at 10:26 PM
Ko Paw... Great minds think alike.... Fools seldom differ... hehe... j/k....
April 19, 2009 at 10:38 PM
ကိုပေါရေ… သမီးက အရောင်နိုင်နင်းလိုက်တာများ ပို့ စ်ကဒ်လေးတွေတောင် ထုတ်လို့ ရတယ်… စိတ်ကူးလေးတွေကလဲ ချိုလိုက်တာ… ဘေးက ကိုပေါရဲ့ ဟိုလူကြီးကတောင် တော်လွန်းလို့ တဲ့ ချီးကျူးနေတယ်… ပန်းချီပြိုင်ပွဲဝင်ခိုင်းပါလား… ဆုချိတ်မှာသေချာတယ်… နောက်နေ့ မှ သားကို မမသီရိဆွဲတဲ့ပုံတွေပြလိုက်ဦးမယ်…
April 19, 2009 at 11:36 PM
သမီးလေးက ဖေဖေကြီးထက်လက်စောင်းထက်ပါလား။ချီးကျူးပါတယ် ပန်းချီဆရာမ သမီးလေးရေ။
April 20, 2009 at 1:53 AM
အောက်ဆုံးက ပုံလေးကို သဘောအကျဆုံးပဲ။ သမီးလေးက အလှကြိုက်တယ် ထင်တယ်။
သမီးမှာ အမြင်ရှိတယ် ၊ အတွေးလဲကောင်းတယ် ၊ အရောင်ကိုလဲ ကောင်းကောင်းနားလည်တယ် ။ သမီးလက်ရာ ၉ မှာ အရောင်စပ်ထားတာ သဘောအကျဆုံးပဲ ။
April 20, 2009 at 9:43 AM
Like Lather Like Daughter!!!!!
သားဆွဲတဲ့ပုံလေးတွေ တင်ဦးမှပဲ ဟိဟိ
ကိုပေါသမီးလေးက တယ်ဟုတ်ပါလား တော်တော်ကောင်းတယ် သူ့စိတ်ကူးလေးတွေရော ဆွဲထားတာလေးရော..
သားကတော့ ငယ်တုန်းက ဆွဲတယ် ခု လုံးဝကို မဆွဲတော့ဘူး။
ကျနော်က ခေါင်းစဉ်မကြည့်ပဲ ပုံတွေမြင်တော့ “သြော်... အန်ကယ်ပေါ ပုံဆွဲတာ အရမ်းတိုးတက်လာပါလား။ အရင်က ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေထက် အပြတ်အသတ်သာနေပါလား” ဆိုပြီး တွေးနေတာ ...
U Ye said...
Your pictures reflect your mind, the colors start from your heart, I think. All the pictures are fabulous. Love to see more and how about "Jack and the Beanstalk"?. Your dad should createablog for you.
U U Ye
Kaung Kin Ko said...
အဖေထက် သမီး တစ်လကြီးတော့မယ် ထင်တယ်။ ဟီးဟီး :D
April 21, 2009 at 4:10 PM
သမီးလက်ရာတွေကို လာရောက်အားပေးသွားသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သမီးက ပန်းချီဆွဲတာ ၀ါသနာပါတဲ့အတွက် သူ့ကို ပန်းချီသင်တန်း (တပတ်ကို တရက် သင်သည်)မှာ အပ်ပေးထားပါတယ်။ ၇ လလောက် ရှိပါပြီ။
ကြက်ကလေးလေး ပုံလေးကို နှစ်သက်တယ် ကိုကြီးပေါ။ အမြဲစာလာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီတခါတော့ ကော်မန့်ခဲ့ပါတယ် ဟဲဟဲ။.. သမီးလေးက ဦးပေါထက်သာတယ်နော့် ဟီး စတာ...
သမီးလေး လက်ရာတွေကို သဘောကျတယ်။ တောက်မယ့်မီးခဲ တရဲရဲ ပေါ့။
၀ါသနာပါတာကို မြေတောင်မြှောက်ပေးတာ ကောင်းတယ်။
ကိုပေါရေ.. သမီးက အတွေးကိုက ပန်းချီတွေးဗျ...
April 24, 2009 at 8:18 AM
Whatamarvellous idea!
Ko Paw's lovely daughter,alittle painter isagood creator.
April 29, 2009 at 5:22 PM